Ikhabhinethi yokulala-ibekwe kwindawo enemithi enoxolo
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguNic & Ian
Buyela kwindalo-'Ikhabhinethi yokulala' yindlu yokulala ethokomeleyo ebekwe kwindawo enoxolo ebizwa ngokuba yi-Sleepy Hollows. Ijikelezwe yindawo yokucula yeentaka, ukufikelela kumlambo-hamba kuphela i-150m ukusuka kumnyango wangaphambili, kwaye ngaphandle nje kweNdlela ye-Wild Atlantic-isiseko esihle sokuhlola emantla-ntshona eDonegal County.
Ukuhamba imizuzu emi-3 ukuya kwiindawo zentengiso zalapha ekhaya Fundisa uTessie, kunye neLeo's Tavern. Imizuzu eli-9 ukusuka eBlue Flag elunxwemeni (eCarrickfinn), imizuzu eli-15 ukusuka e-Errigal Mountain, imizuzu engama-25 ukusuka eGlenveagh Castle & National Park.
Eyaziwa ngokuba 'yiKhabhinethi yokulala'- le ndawo ikhululekileyo izimele iphakathi kwepropathi yeehektare ezi-5, ibekwe kwindawo ezolileyo yemithi.
Isanda kulungiswa, sinikezela ngekhaya elicocekileyo, elibanzi, nelitofotofo kude nekhaya. Ikhabhinethi igqunyiwe ngoko ke iyafumaneka unyaka wonke, ineeradiyetha zombane, ibhedi eshushu kunye nebhotile yamanzi ashushu kwiinyanga ezibandayo. Kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini, indawo yokuhlala eyahlukileyo kunye negumbi lokutyela, igumbi lokuhlambela elineshawa, indlu yangasese kunye nesitya. Ikhitshi ikulungele ukulungiselela ukutya okusisiseko kunye ne-2 ring hob yegesi, ifriji enendawo yesikhenkcisi, i-microwave, iketile kunye ne-toaster. Igadi yabucala engasemva kwekhabhinethi ilungele ii-barbecue, enendawo yokupaka iimoto ezimbini kunye nendawo yokuhlala ngaphambili.
Siyabathanda izilwanyana zasekhaya - izilwanyana zasekhaya zamkelekile simahla zivumela inkunkuma yazo icocwe kwaye ilahlwe, zigcinwa kwindawo yokukhokela kwaye ngaphakathi kwikhabhini kufuneka zigcinwe ngaphandle kwebhedi. Ukuba unazo naziphi na iimfuno ezikhethekileyo zesilo-qabane sakho - nceda usitsalele ukuze sixoxe. Kuya kufuneka uze neebhedi zabo, kunye nokutya / izitya zamanzi.
Kwabo bandwendwela ngexesha leKrisimesi kunye noNyaka oMtsha - siza kubandakanya inani elincinci leefestoni zomthendeleko ezinencasa.
Ikhabhinethi yethu ingaphandle kweNdlela ye-Wild Atlantic kwaye sisiseko esihle sokuhlola umntla-ntshona we-County Donegal. Ukuhamba-hamba imizuzu emi-3 ukuya kwi-pub yasekhaya Fundisa uTessie, kunye ne-pub kunye nendawo yokutyela iLeo's Tavern- edume ngeeseshini zayo zomculo wesintu wase-Irish (ubusuku obuninzi), kwaye yindawo yokuzalwa yeetalente zomculo ezidumileyo u-Enya, uClannad noMoya Brennan.
Imizuzu eli-9 yokuqhuba ukusuka kunxweme olukufutshane lweBlue Flag (eCarrickfinn), imizuzu eli-15 ukusuka e-Errigal Mountain, kunye nemizuzu engama-25 yokuqhuba ukusuka eGlenveagh Castle kunye nePaki yeSizwe.
Zininzi iindawo zokuhamba ezintle kwiminyango yethu esinokuyincoma; iindawo ukonwabela iipikniki, iindawo zokutyela, iindawo zokusela kunye nokuthotywa kwenkcubeko yendawo. Maxa wambi indawo yethu ityelelwa liqela elincinane lamaxhama, yaye kuye kwabonwa iiotter ecaleni komlambo wethu ezinesalmon.
Umbuki zindwendwe ngu- Nic & Ian
Sihlala sijonge ukubakho ekufikeni kwakho kwaye siyavuya ukukukhokelela kuyo yonke into enikezelwa ngummandla. Ngaso nasiphi na isihlandlo esingayi kufumaneka ukuze sikubulise, siya kulungiselela ukuba kubekho omnye umntu apho ukuba kunokwenzeka. Sikholelwa ukuba kubalulekile ukukunika ubumfihlo bekhabhinethi njengendawo yakho, kodwa samkele ithuba lokwenza abahlobo abatsha. Sihlala sifunyanwa ngaphandle sisebenza kwindawo ethile kwipropathi kwaye sihlala singeneka. Kukho iiglavu zegadi ezisecaleni kunye ne-wellies ukuba uziva ufuna ukujoyina!
Sihlala sijonge ukubakho ekufikeni kwakho kwaye siyavuya ukukukhokelela kuyo yonke into enikezelwa ngummandla. Ngaso nasiphi na isihlandlo esingayi kufumaneka ukuze sikubulise, siy…
UNic & Ian yi-Superhost